Amafilimu izindikimba ezibhubhisayo emlandweni cinema emhlabeni wathwebula emaningi khona, kodwa uNeil Marshall iphrojekthi "uSuku Lokwahlulela" (2008) akulona omele lalibhekisela uhlobo, naphezu kwesabelomali $ 30 million uma kuqhathaniswa nesizotha.
izethameli zakho uphinde uthole isithombe niche yakho ziyohlala kahle. Izibuyekezo of the movie ikakhulukazi omuhle futhi hlangothi, kanti nokukalwa IMDb okufushane kwaba 6.00, okuyinto akukubi ngoba isenzo movie isigaba "B". Abadlali of the ifilimu "uSuku Lokwahlulela" ingxenye enkulu kancane eyaziwa ifilimu izilaleli, share sengonyama of filmographies benze ama-movie ne-TV kanye chungechunge. Okuwukuphela i Ageless Malkolm Makdauell, ngubani luhlobise nobukhona bakhe tape.
"USuku Lokwahlulela" (2008) ngokufaka incazelo ukubuyekeza kuyinto dystopia Dandy, ngokuyinhloko ukudala "Izinja-amaqhawe" futhi "Spuks" ayegcwele kungabhekisela, ukhumbula izinsuku esezadlula futhi eziningi izinkomba. Ngokusho abenzi mafilimu, iribhoni ngesakhiwo sifana Kuqhuma "Mad Max", "Izinsuku 28 kwesikhathi" kanye "Phuma New York", indaba kudlalwa ngesiNgisi methodically.
Abadlali of the ifilimu "uSuku Lokwahlulela" owawusekelwe empilweni umqondo kombhali kusekelwe umqondo wokuba ngumqondisi uNeil Marshall, nombhali zombhalo, okuyinto wayefuna push Knights ephakathi amasosha yesimanje.
Ngokusho irekhodi, entwasahlobo ka-2008 ihlanganisa Scotland Igagasi ezingelapheki futhi ebulalayo, igciwane ezazingaziwa. Ososayensi bakubiza "umvuni". Izimpawu eyinhloko lesi sifo yilabo imfiva kanye nezilonda. Isifunda ngomyalo uhulumeni ngokushesha isehlane, futhi izakhamuzi zalo kwesokunxele kudingeka bazibonele. Kulesi kwesandulela, futhi kukhona isingeniso sokuqala izilaleli umlingisi iribhoni main - kwentombazanyana, ngenxa okuyinto unina wadela ukuphila.
Esikhathini "ngesikhathi sangempela"
izenzakalo enabileko 2035, lapho "umvuni" futhi kwenza ngokwayo wazizwa. Ngalesi sikhathi buvela inhlokodolobha British London. Ngu oda uhulumeni uya iqembu ochwepheshe, eholwa Major Iden Sinkler (Rhona Mitra) - ingane eyodwa ukutakulwa. Umyalo ithunyelwa Scotland okuthiwa ushiyiwe, lapho, ngokomlando kwesathalayithi, wathola abasindile. Ukuba khona kwabantu ezindaweni ngokuhlukaniswa kufakazela ukuthi wokugoma zabo kwatholakala. Nansi ukutholakala kwakhe futhi ukulethwa kuthiwa imisebenzi ye Abezempi. Uma endaweni ngokuhlukaniswa, Major Sinclair nawozakwabo ibhekene amaqembu amabili aphikisanayo abasindé - amaqhawe ephakathi amazimu punk. Abadlali of the ifilimu "uSuku Lokwahlulela" ngokunikeza umdali imibono, baye babonisa efaneleyo nokuzinikela.
actress TV ewuchungechunge
Iqhaza eziholayo Major Iden Sinkler waya ifilimu British kanye teleaktrisa, imodeli kanye umculi Rona Mitra. Ngalesi sikhathi, wasebenza ikakhulukazi eMelika. I Mitra edume kunazo wathola njengenhlangano movie actress ithelevishini, "ewuchungechunge" ezihlukahlukene zokwakheka.
Big umsebenzi movie Rhone qala futhi sikhule ngesizotha. izindima wakhe wokuqala kule sici amafilimu wawutholakala, ezifana e-amabhayisikobho "monk Dawson" futhi "umthengisi". Iqhaza wokuqala omkhulu njengomdlali waseshashalazini Ingumfanekiso Scheherazade ku ephansi isabelomali ahlekisayo ifilimu fantasy "Lo knight lokuqala egcekeni Aladdin." Kuyindida ke ayibanga intuthuko umsebenzi wakhe futhi "Beowulf", nakuba ayifeza ngayo indima uhlamvu zesifazane main, kanti uzakwabo yena edumile Christopher Lambert.
Ngemva ubambisene Hollywood inkanyezi Ron enquma ukuthuthela e-United States bese uzama inhlanhla yakhe edolobheni tinsel. Ukunikezwa batheleka ngobuningi, kodwa actress waphinda wahlabelela indima izinhlamvu yesibili: .. "Imfihlo Agent," "Thola Carter," "Invisible," "Sweet Home Alabama," njll Imisebenzi best of actress kubhekwe izinhlamvu ifilimu "The Life of David Gale" "Shooter", "inombolo 23" futhi ochungechungeni "Emuva", "amasango" "Boston Legal," "Stargate Yonke Endaweni Yonke" futhi "zomzimba". Rhona Mitra uqobo "uSuku Lokwahlulela luphela," kusho omunye imidwebo best Filmography yakhe.
"USuku Lokwahlulela" Star kinoprologa
Abadlali of the ifilimu "uSuku Lokwahlulela", ngacula izindima ezincane, hhayi eliphansi in amakhono Mitre. Umlingisikazi Emma Klisbi, wayevele nakho esebenza umqondisi Marshall we ifilimu "Inja Amabutho" (2001), yena wadlala indima unina Heroine Ketrin Sinkler. Lo wesifazane, ekubeni e inani lababaleki uzama ukushiya Scotland ingcoliswe ingane ngezingalo zakhe. Inhlamvu elimaza ingane sidilize amehlo intombazane. Umama has isikhathi ukubeka umntwana ezinsukwini zokugcina indiza wezempi, inikeza indlela amasosha. Soldier ukubulawa noCatherine isixuku bahlanya. Lo mlingisi waziwa ukuze izilaleli iqhaza ifilimu "esikoleni Uqalekisiwe", "soulmate", "Inja Amabutho" futhi "uSuku Lokwahlulela." Emma Klisbi ingenye abadlali oluthandayo Neil Marshall.
izindima Vtoroplanovyh besilisa abadlali babo
British ifilimu kanye yaseshashalazini umlingisi Malkolm Makdauell abadlale indima Dr. Marcus Kane - umholi welinye iqembu elilwayo, ukwakha indlela yokuphila, efana Ephakathi. Phakathi ifilimu yakhe umsebenzi weminyaka engu-amane, wayedlala izindima isisindo, kodwa udumo efika izithombe egqamile, abamelene ngezinye izikhathi ngonya. Isenzakalo esidume kunazo zonke zazo zibhekwa indima ifilimu "A Clockwork Orange», «O, Lucky Man!" Futhi "uCaligula".
Dzheremi Kratchli, ophindukuzalwa e sikaRichter Ubuye isihloko esasiwafanele lale nkanyezi okunjengalokho lokuqala, kuyaziwa ukuthi abambe iqhaza movie "Nkosi kweMpi" uchungechunge futhi "uHannibal" "Black Sails" futhi "Marple Agatha Christie".
Amabhayisikobho aphathelene nothando lweqiniso: okuhamba phambili ohlwini, incazelo emfushane
"Hustle American": abalingisi, izindima, izithombe kanye amaqiniso athakazelisayo
Edgar Rayt: ama-movie ne Biography emfushane. "Shaun of the Dead" (Edgar Rayt)
Amathiphu awusizo mayelana nokulahlekelwa isisindo esiswini
Umvikeli, noma yiliphi igama elithi Alexey
Jousting izinqaba medieval: isikimu, idivayisi kanye ukuzivikela. Umlando izinqaba Knights medieval '